आज बढ्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो…… – SUDUR MEDIA
आज बढ्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो……
May 2, 2021 AdminLeaveaComment on आज बढ्यो सुनको भाउ ! हेर्नुहोस् प्रति तोला कति पुग्यो……
आज बैसाख १९ गते आइतबार अर्थात साताको पहिलो दिन सुनको भाउ बढेको छ । आज आइतबारको दिन छापावाला सुनको भाउ तोलामा एक सय रुपैयाँले बढेर ९० हजार रुपैयाँ कारोबार मूल्य कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अस्ति शुक्रबार तोलामा नौ सय रुपैयाँले घटेर छापावाला सुन ८९ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । महासंघले आजका लागि तेजावी सुनको भाउ ८९ हजार पाँच सय रुपैयाँ तोकेको छ । आज चाँदीको भाउमा कुनै घटबढ भएको छैन। शुक्रबार एक हजार २९५ रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज पनि उस्तै छ ।
सामान्य अवस्थामा देशभर दैनिक २० देखि ४० किलो सुनको कारोबार हुने गरेको भएपनि कोभिड माहामारीको दोस्रो लहका कारण अहिले सुनको कारोबार निकै आरालो झरेको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । देशका प्रमुख सहरमा जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण बजार प्रभावित भएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
दिनदिनै बढ्दै कोरोना सं’क्रमित,आज थप ७२११ कोरोना सं’क्रमित पुष्टि, २७ जनाको मृ’त्यु,सक्रिय सं’क्रमित ४८ हजार नाघे
भोलिको राशिफल हेर्नुहोस् : मिति २०७७ साल चैत्र १३ गते शुक्रबार इ.स.२०२१ मार्च २६ तारिक